Maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa oo xukun ku riday dhallinyaro Soomaaliyeed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa oo xukun ku riday dhallinyaro Soomaaliyeed
Maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa min lix sano oo xabsi ah ku xukuntay labo dhallinyaro Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ku eedeeysay inay ka mid yihiin Xarakada Al-shabaab.
Xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya ayaa sheegay in labada nin ay aas-aasayeen farac ka mid ah Xarakada Al-shabaab ee dalka Itoobiya, sidoo kalena ay dhallinyaro badan ka qorayeen gudaha Itoobiya ka fulliya qorshayaasha weerarada ah ee Al-shabaab.
Labada nin oo lagu kala magacaabo Badris Yuusuf iyo Anas Cismaan ayaa gacanta lagu dhigay seddax sanno ka hor waxaana lagu eedeeyay markaas inay qorsheynayeen in ay weerar ka fuliyaan gudaha dalka Itoobiya.
Dalka Itoobiya ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ciidanka usoo diray dalka Soomaaliya ee AMISOM, waxaana ay dagaal adag oo gudaha iyo dibaddaba ah kula jirtaa Xarakada Al-shabaab.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa inta badan weerarro ku qaadda dalalka deriska ah ee ciidamada u soo diray dalka Soomaaliya, waxaana meelaha ay aadka u beegsadeen ka mid ah dalalka Kenya iyo Uganda.